ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်နိုင်တဲ့ မိဘတွေရဲ့ အကျင့်ဆိုးများ – For her myanmar
Posted on February 25, 2019 Author Ei Mon	Comment(0)
လက်ဦးဆရာ ဖြစ်ရတာ လွယ်တာမှတ်လို့..
သားသမီးတွေရဲ့ လက်ဦးဆရာက မိဘပါပဲ။ အတုမြင်အတတ်သင် အရွယ် ကလေးလေးတွေက မိဘတွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ပုံတူကူးချတာ ပုံမှန်ပဲ မဟုတ်လား။ ဒီအချိန်မှာ မိဘတွေက အမူအကျင့်ကောင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ရင်း ကလေးတွေကို လမ်းပြတာက အမှန်ကန်ဆုံး နည်းလမ်းပါပဲ။
တကယ်တော့ မိဘဖြစ်ရတာလည်း လွယ်တာ မဟုတ်ပါဘူးရယ်… ကလေးတွေရှေ့မှာ အကျင့်ဆိုးတွေ ပြမိရင် ကလေးက ပုံတူကူးသွားမှာမို့ သတိထားရတာတွေ ရှိသလို ကိုယ့်ရဲ့ အမူအကျင့်ဆိုးတွေကလည်း ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ သက်ရောက်စေတယ်ဆိုတော့ သတိထားစရာတွေ အများကြီးပဲပေါ့.. ဒါဆို မိဘတွေရဲ့ ဘယ်လို အကျင့်ဆိုးတွေကများ ကလေးရဲ့ ကိုယ်စိတ်နှလုံး ကျန်းမာရေးပေါ် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာ တူတူကြည့်ရအောင်နော်..
ကိုယ့်ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို အပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်း
ကိုယ့်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ကိုယ် သဘောမကျတဲ့အကြောင်း၊ ပြစ်ချက်တွေ များကြောင်း၊ စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိကြောင်း ကလေးရှေ့မှာ ပြောပြနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကလေးက ကိုယ်နေဟန်ထား အလှအပပေါ် အရမ်းကို စိုးရိမ်စိတ်များတဲ့သူ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပြစ်ချက်ကို ကိုယ်တိုင် ထိုင်ရှာနေတာက မကောင်းတာဖြစ်လို့ ဒီလိုမျိုးတွေ ပြောနေမယ့်အစား အားကစားလုပ်ရင် ၊ ကျန်းမာစေတဲ့ အစားအစာတွေစားရင် ၊ အိပ်ရေးဝဝသာ အိပ်မယ်ဆိုရင် ကောင်းကျိုးတွေ ဘယ်လောက်များမယ်ဆိုတာ များများ ပြောပေးရပါမယ်။ ဒါမျိုးကို ကလေးတွေက ပိုပြီး မှတ်မိပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုကို အစားနဲ့ ဖြေဖျောက်ခြင်း
စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းတဲ့အခါ အကောင်းဆုံး ဖြေဖျောက်ဖို့ စားနေမယ်ဆိုရင် ကလေးအတွက် မကျန်းမာစေတဲ့ အလေ့အထကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးရာ ရောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်ကောင်းဖို့ အစားအစာကို ဖိစားရမယ်ဆိုတာမျိုး ကလေးက အတွေးပေါက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပြမယ့်အစား စိတ်ခံစားမှု မကောင်းဘူးလို့ ထင်လာတဲ့အခါတိုင်း သူငယ်ချင်းနဲ့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် စကားပြောတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် လမ်းထွက်လျှောက်တာမျိုး လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဖုန်းအကြာကြီးသုံးတာ မကောင်းဘူး၊ မသုံးနဲ့လို့ ကလေးကို ပြောနေပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်က ဖုန်းသုံးနေတယ် ဆိုရင် ကလေးကလည်း နားထောင်မှာ မဟုတ်သလို သူကျသုံးတယ်၊ ကိုယ်ကျ မသုံးရဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး တွေးပြီး လေးစားမှု လျော့သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ ကလေးရှေ့မှာ အမြဲတမ်း ဖုန်းနဲ့ မျက်နှာမခွာ လုပ်ပြနေမယ့်အစား မိသားစုထဲမှာ ဖုန်းသုံးမယ့် အတိုင်းအတာကို အချိန်ကန့်သတ်ထားပါ။ ဒါမှ မိသားစုအတွက် စကားလက်ဆုံကျဖို့ အချိန်ပိုများမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်မှာ အဆင်မပြေလို့ ပြန်လာပြီး စိတ်ညစ်ပြေဆိုပြီး တစ်ခွက်တစ်ဖလားတော့ မမော့လိုက်ကြပါနဲ့နော်… အဲ့လိုမျိုးတွေ ဘီယာဘူးကြား မှောက်လောက်အောင် စိတ်အပန်းဖြေတဲ့နည်း သုံးမယ့်အစား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးခြင်း ၊ တရားထိုင်ခြင်းကို ရှေ့က ဦးဆောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုရင် ကလေးမှာလည်း ကျန်းမာတဲ့ အလေ့အထ အသိတိုးမှာပါ။
Related Article>>>နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ကလေးပျိုးထောင်နည်း
ကိုယ့်ကလေးကို အခြားကလေးတွေနဲ့ နှိုင်းနှိုင်းပြီး ပြောတာက ကလေးကို စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှု မရှိလာစေတဲ့အပြင် ကြိုးစားချင်စိတ်ပျောက်ပြီး ဂျစ်ကန်ကန် ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီလို ပြိုင်ဆိုင်ခိုင်းမယ့်အစား ကလေးရဲ့ ကြိုးစားချင်စိတ်ကို ချီးကျူးပေးပါ။ သူစိတ်ဝင်စားမယ့် အရာတစ်ခုကို ကူညီရှာဖွေပေးပြီး လေ့ကျင့်ပေးပါ။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ ပိုပြီး မွေးဖွားပေးရာ ရောက်ပါတယ်။
ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးနဲ့ စကားနိုင်လုပြီး ကလေးရှေ့မှာ အငြင်းပွားနေတဲ့ အဖေနဲ့ အမေကို ကြည့်ပြီး ဒီလိုအငြင်းပွားတာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းလို့ ကလေးက ထင်ကောင်းထင်နေနိုင်ပါတယ်။ လင်မယားနှစ်ယောက် စိတ်တိုစကားများတိုင်း သူနိုင်ကိုယ်နိုင် မပြီးနိုင်အောင် စကားနိုင်လုနေမယ့်အစား စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်လိုဖြေဖျောက်မယ် ဆိုတာမျိုး စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမွန် ပြောပြတဲ့ အပေါ်က အချက်လေးတွေကို သတိပြု ဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာတဲ့ သားသား ၊ မီးမီးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်မှာ အမှန်ပါပဲ ယောင်းတို့ရေ…
Reference: webmd, everydayhealth
လကျဦးဆရာ ဖွဈရတာ လှယျတာမှတျလို့..
သားသမီးတှရေဲ့ လကျဦးဆရာက မိဘပါပဲ။ အတုမွငျအတတျသငျ အရှယျ ကလေးလေးတှကေ မိဘတှရေဲ့ အမူအကငျြ့တှကေို ပုံတူကူးခတြာ ပုံမှနျပဲ မဟုတျလား။ ဒီအခြိနျမှာ မိဘတှကေ အမူအကငျြ့ကောငျးတှကေို ကိုယျတိုငျလုပျရငျး ကလေးတှကေို လမျးပွတာက အမှနျကနျဆုံး နညျးလမျးပါပဲ။
တကယျတော့ မိဘဖွဈရတာလညျး လှယျတာ မဟုတျပါဘူးရယျ… ကလေးတှရှေမှေ့ာ အကငျြ့ဆိုးတှေ ပွမိရငျ ကလေးက ပုံတူကူးသှားမှာမို့ သတိထားရတာတှေ ရှိသလို ကိုယျ့ရဲ့ အမူအကငျြ့ဆိုးတှကေလညျး ကလေးရဲ့ ကနျြးမာရေးအပျေါ အတိုငျးအတာတဈခုထိ သကျရောကျစတေယျဆိုတော့ သတိထားစရာတှေ အမြားကွီးပဲပေါ့.. ဒါဆို မိဘတှရေဲ့ ဘယျလို အကငျြ့ဆိုးတှကေမြား ကလေးရဲ့ ကိုယျစိတျနှလုံး ကနျြးမာရေးပျေါ ဘယျလို အကြိုးသကျရောကျတယျဆိုတာ တူတူကွညျ့ရအောငျနျော..
ကိုယျ့ရဲ့ ပုံပနျးသဏ်ဍာနျကို အပွဈတငျဝဖေနျခွငျး
ကိုယျ့ရဲ့ ပုံသဏ်ဍာနျကို ကိုယျ သဘောမကတြဲ့အကွောငျး၊ ပွဈခကျြတှေ မြားကွောငျး၊ စိတျကနြေပျမှုမရှိကွောငျး ကလေးရှမှေ့ာ ပွောပွနမေယျဆိုရငျ ကိုယျ့ကလေးက ကိုယျနဟေနျထား အလှအပပျေါ အရမျးကို စိုးရိမျစိတျမြားတဲ့သူ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ ပွဈခကျြကို ကိုယျတိုငျ ထိုငျရှာနတောက မကောငျးတာဖွဈလို့ ဒီလိုမြိုးတှေ ပွောနမေယျ့အစား အားကစားလုပျရငျ ၊ ကနျြးမာစတေဲ့ အစားအစာတှစေားရငျ ၊ အိပျရေးဝဝသာ အိပျမယျဆိုရငျ ကောငျးကြိုးတှေ ဘယျလောကျမြားမယျဆိုတာ မြားမြား ပွောပေးရပါမယျ။ ဒါမြိုးကို ကလေးတှကေ ပိုပွီး မှတျမိပါတယျ။
စိတျဖိစီးမှုကို အစားနဲ့ ဖွဖြေောကျခွငျး
စိတျပကျြဝမျးနညျးတဲ့အခါ အကောငျးဆုံး ဖွဖြေောကျဖို့ စားနမေယျဆိုရငျ ကလေးအတှကျ မကနျြးမာစတေဲ့ အလအေ့ထကို လကျဆငျ့ကမျးပေးရာ ရောကျပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ ခံစားခကျြကောငျးဖို့ အစားအစာကို ဖိစားရမယျဆိုတာမြိုး ကလေးက အတှေးပေါကျသှားနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုလုပျပွမယျ့အစား စိတျခံစားမှု မကောငျးဘူးလို့ ထငျလာတဲ့အခါတိုငျး သူငယျခငျြးနဲ့ စိတျပွလေကျပြောကျ စကားပွောတာမြိုး ဒါမှမဟုတျ လမျးထှကျလြှောကျတာမြိုး လုပျပေးသငျ့ပါတယျ။
ဖုနျးအကွာကွီးသုံးတာ မကောငျးဘူး၊ မသုံးနဲ့လို့ ကလေးကို ပွောနပေမေဲ့ ကိုယျတိုငျက ဖုနျးသုံးနတေယျ ဆိုရငျ ကလေးကလညျး နားထောငျမှာ မဟုတျသလို သူကသြုံးတယျ၊ ကိုယျကြ မသုံးရဘူးဆိုတဲ့ အတှေးမြိုး တှေးပွီး လေးစားမှု လြော့သှားတာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။ ဒီတော့ ကလေးရှမှေ့ာ အမွဲတမျး ဖုနျးနဲ့ မကျြနှာမခှာ လုပျပွနမေယျ့အစား မိသားစုထဲမှာ ဖုနျးသုံးမယျ့ အတိုငျးအတာကို အခြိနျကနျ့သတျထားပါ။ ဒါမှ မိသားစုအတှကျ စကားလကျဆုံကဖြို့ အခြိနျပိုမြားမှာ ဖွဈပါတယျ။
အလုပျမှာ အဆငျမပွလေို့ ပွနျလာပွီး စိတျညဈပွဆေိုပွီး တဈခှကျတဈဖလားတော့ မမော့လိုကျကွပါနဲ့နျော… အဲ့လိုမြိုးတှေ ဘီယာဘူးကွား မှောကျလောကျအောငျ စိတျအပနျးဖွတေဲ့နညျး သုံးမယျ့အစား လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပေးခွငျး ၊ တရားထိုငျခွငျးကို ရှကေ့ ဦးဆောငျလုပျပွမယျဆိုရငျ ကလေးမှာလညျး ကနျြးမာတဲ့ အလအေ့ထ အသိတိုးမှာပါ။
Related Article>>>နိုငျငံရပျခွားမှာ ခတျေစားနတေဲ့ ကလေးပြိုးထောငျနညျး
ကိုယျ့ကလေးကို အခွားကလေးတှနေဲ့ နှိုငျးနှိုငျးပွီး ပွောတာက ကလေးကို စိတျဓာတျတကျကွှမှု မရှိလာစတေဲ့အပွငျ ကွိုးစားခငျြစိတျပြောကျပွီး ဂဈြကနျကနျ ဖွဈလာစနေိုငျပါတယျ။ ဆိုတော့ အဲဒီလို ပွိုငျဆိုငျခိုငျးမယျ့အစား ကလေးရဲ့ ကွိုးစားခငျြစိတျကို ခြီးကြူးပေးပါ။ သူစိတျဝငျစားမယျ့ အရာတဈခုကို ကူညီရှာဖှပေေးပွီး လကေ့ငျြ့ပေးပါ။ ဒီလိုဆိုရငျတော့ အလအေ့ကငျြ့ကောငျးတှေ ပိုပွီး မှေးဖှားပေးရာ ရောကျပါတယျ။
ဘာမဟုတျတဲ့ ကိစ်စလေးနဲ့ စကားနိုငျလုပွီး ကလေးရှမှေ့ာ အငွငျးပှားနတေဲ့ အဖနေဲ့ အမကေို ကွညျ့ပွီး ဒီလိုအငွငျးပှားတာဟာ ကောငျးမှနျတဲ့ နညျးလမျးလို့ ကလေးက ထငျကောငျးထငျနနေိုငျပါတယျ။ လငျမယားနှဈယောကျ စိတျတိုစကားမြားတိုငျး သူနိုငျကိုယျနိုငျ မပွီးနိုငျအောငျ စကားနိုငျလုနမေယျ့အစား စိတျဖိစီးမှုကို ဘယျလိုဖွဖြေောကျမယျ ဆိုတာမြိုး စဉျးစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
အိမှနျ ပွောပွတဲ့ အပျေါက အခကျြလေးတှကေို သတိပွု ဆငျခွငျမယျဆိုရငျ စိတျရောကိုယျပါ ကနျြးမာတဲ့ သားသား ၊ မီးမီးတှကေို ပွုစုပြိုးထောငျနိုငျမှာ အမှနျပါပဲ ယောငျးတို့ရေ…
Tagged Affect, Bad, Family, habits, Health, Kids, Relationship
ခရက်ရှ် (crush) မရှိလေ သာယာလေ…
Posted on March 21, 2017 March 21, 2017 Author Christina Rosy
ခရက်ရ်ှကို အစိမ်းသက်သက် မေ့ပစ်လိုက်သော အက်ထမိန်တစ်ယောက်၏ ရင်တွင်းခံစားချက်များ။ ဂါထားလေးပါ အပိုထည့်ပေးထားတယ်နော်။
ပျိုမေတို့ရဲ့ ခွီစရာ ချစ်သူဖြစ်စချိန်းတွေ့ခြင်း အတွေ့အကြုံများ
Posted on February 16, 2017 Author Christina Rosy
ဗယ်လင်တိုင်းဒေး မတိုင်ခင် For Her Myanmarက ပျိုမေတို့ရဲ့ချစ်သူဖြစ်စ အတွေ့အကြုံကို မေးမြန်းတဲ့အခါမှာ ရလာတဲ့ကွန်မန့်လေးတွေထဲက ၆ခုကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ Handsetဝယ်ဖို့သွားတာလေ ကားလမ်းကူးခါနီးဘေးကသူ့က်ုဘယ်နားကိုင်ရမှန်းမသိဘူး ဟိဟိ လက်လေးတွဲကားလမ်းကူးလျှောက်ပေါ့ သိပ်မကြာဘူး သူ့ခေါင်းက ဒိန်းဆို လမ်းကsignboard ကိုတိုက်ပါလေရော။ လုံမ စက်ဆိုင် Online ပေါ်မှာ စသိပြီး ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့တော့ အပြင်မှာ ပထမဆုံးလာတွေ့မယ်ဆိုပြီး သူ့ကိုမလာခိုင်းပဲ သူနေတဲ့ လမ်းထိပ်ကို သွားခဲ့တယ်……သူကိုလမ်းထိပ်မှာစောင့်ခိုင်းပြီး ကိုယ်ကတော့ကိုယ်ယောင်မပြပဲ သူ့ကို ကားပေါ်က ချောင်းကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပေါ့….. ကိုယ်တော်ချောက ရင်တွေ ခုန်ပြီး..ဒူးတွေတုန်နေလို့တဲ့ သစ်ပင်အောက်လေးမှာ စောင့်ကြောင့်လေးထိုင်နေလို့မနည်းရှာခဲ့ရတယ်…….ရှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာ ရီလိုက်ရတာ ဆိုတာ…… ??? သစ်ပင်အောက်လေးမှာငုတ်တုတ်လေး ထိုင်နေတဲ့ပုံစံလေးကို တသက်မမေ့ဘူး… အရမ်းချစ်တယ် ????? ဟေ မန် ချစ်​သူဖစ်​စ..က ​တွေ့​တွေ့ ချင်း အိမ်​သာတက်​ချင်​တဲ့သူက..ကြိုက်​ခါစဆို​တော့ […]
Posted on August 8, 2017 Author Miko
နယ်မြို့လေးကနေ ရည်မှန်းချက်တွေအတွက် တစ်ယောက်တည်းလာနေသူတွေနဲ့ အခြေအနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တစ်ကိုယ်တည်းနေနေရတဲ့ ယောင်းတို့ဟာ အနည်းနဲ့အများတော့ ဒီလိုအခြေအနေတွေ ကြုံကြရမှာပါနော်..
နွေရာသီမှာ အသားအရေထိန်းသိမ်းဖို့နည်းလမ်း (၅) သွယ်